Quibi na-ahapụ ụfọdụ egwu egwu iyi na YouTube maka ndị na-ekiri TV
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Quibi na-ahapụ ụfọdụ egwu egwu iyi na YouTube maka ndị na-ekiri TV
by Timothy Rawles April 30, 2020 1,085 echiche
Quibi na-akwado iji mechie onyinye ya naanị maka ọnwa atọ n'efu oge ikpe ma ọ na-enye ndị nwere ike ịdebanye aha ntakịrị ọdịnaya ha na-enweghị ha ibudata ngwa ahụ.
Oria oria ojoo a nwere ike gbochie ihe nlere anya nke Quibi na-anwa iputa. Mpempe akwụkwọ ọdịnaya dị mkpụmkpụ nwere ụfọdụ nnukwu aha Hollywood nyere onyinye, mana ebe ndị mmadụ nọrọ n'ụlọ, akụkụ nke ọrụ a nwere ike ọ gaghị enwe nnukwu mmasị na ndị debanyere aha.
Mmalite ahụ ewepụtala ngosipụta nke Egwuregwu Kasị Egwu, The na-amabughị na Ezigbo na peeji nke YouTube nke a na-ejikarị dịka katalọgụ na adọkpụ ụgbọala na-adọkpụ.
Agbanyeghi na ikpo okwu a na akwado ndi nwere episodic, ha na enye ndi na-ekiri ha isi nke mbu ma na-ario ka ha denye aha ha iji hu ihe ndi ozo.
Ndị egwu egwu nwere ike ịchọ ịlele Onye mbia, ọ gụnyere na nyocha YouTube.
Nke a bụ mmebi nke ibé:
“A na-atụba onye ọkwọ ụgbọ ala na-enweghị atụ nke ụgbọ elu na-atụ ụjọ nke kacha njọ mgbe onye njem Hollywood Hills dị omimi batara n'ụgbọala ya. Ya na-emenye ụjọ, obi-akwụsị akwụsị na The mba ọzọ ekpughe ihe karịrị 12 na-emenye ụjọ awa ka ọ navigates na seedy underbelly nke Los Angeles na a spain-chilling egwuregwu nke pusi na òké. ”
Ọzọkwa Egwuregwu Kasị Egwu nwere ike ime ka mmasị gị nwee:
"Ọ chọsiri ike ilekọta nwunye ya dị ime tupu ọrịa na-arịa ọrịa nwere ike igbu ya, Dodge Maynard nabatara onyinye nke isonye na egwuregwu na-egbu egbu ebe ọ ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na ọ bụghị dinta - kama anụ oriri."